Ungazisusa njani iintsholongwane kwiMac yakho | Izixhobo zeNdaba
Iindaba zeGajethi | 24/03/2022 12:40 | iapile
Njengayo nayiphi na inkqubo yekhompyuter, i Inkqubo yokusebenza ye-Apple inobuthathaka bayo. Ezi zisetyenziswa ziintsholongwane ukufikelela kwikhompyuter kwaye zineenkcukacha eziyimfihlo, njengamakhadi okuthenga ngetyala okanye iinkcukacha zebhanki. Amaxesha amaninzi, umsebenzisi akazi nokuba i ubukho bentsholongwane, ekubeni indlela yayo yokwenza ithule kwaye ifunxile.
Ukuba le yimeko yakho, sineendaba ezimnandi kuwe: kukho iindlela ezininzi zokukhusela iMac yakho, eyona ndlela yaziwayo kukufaka i-antivirus ethile, nangona zikhona iindlela ezininzi ukususa intsholongwane kwi Mac ngaphandle kwesidingo sokwazi nzulu ukuba ikhowudi yayo yangaphakathi isebenza njani.
1 Yintoni intsholongwane kwaye kutheni ibaluleke kangaka?
2 Ungazisusa njani iintsholongwane kwiMac?
2.1 ingqalelo kwiimpawu
2.2 Susa isoftware efakiweyo
2.3 Ukufakwa kwesoftware yokhuseleko
Yintoni intsholongwane kwaye kutheni ibaluleke kangaka?
Baziwa ngokuba iintsholongwane zekhompyuter kwiinkqubo ezifihla imisebenzi yobuqhophololo, njengokubiwa kwezazisi okanye ukudluliselwa kwebhanki. Ke, iintsholongwane ziyisoftware enokuthi ukufakwa kwayo kufuneke, ngaphandle kokuba umsebenzisi ayazi, ukufikelela kwabantu abangagunyaziswanga kulwazi oluqulethwe kwiPC.
Nangona sihlala sibhekisa kuzo ngokutshintshanayo, eneneni zininzi iintsholongwane ezahlukayo kuzo modus operandi. Kuzo zonke, i malware zisetyenziswa kakhulu ngabaduni okanye izigebenga ze-cyber. Ezinye zezona malware zisetyenziswayo ukuhlasela iiMacs ziiTrojans, iransomware, phishing okanye iadware. Ngamnye wabo usebenza ngendlela eyahlukileyo kwaye ufikelela kwiidatha ngeendlela ezahlukeneyo.
Ungazisusa njani iintsholongwane kwiMac?
Iintsholongwane ezininzi zifikelela kwisixokelelwano ngokufakela isoftware ethile. Nangona kunjalo, kukho ezinye iindlela zokusebenzisa i-cybercriminals ukungena kwinkqubo; imiyalezo, ii-imeyile, ukungasebenzi kakuhle ... Kwimeko nayiphi na into, ukufikelela kwe-malware kunokupheliswa ukuba sinezixhobo eziyimfuneko.
Ingqalelo kwi Los iimpawu
Kwiimeko ezininzi, intsholongwane ihlala ingabonakali kwaye ibonakala ingasebenzi ixesha elithile. Kweli nqanaba, izigebenga ze-cyber qokelela ulwazi oluyimfihlo kwaye uzame ukufikelela kwezinye izixhobo ukuze uqhubeke nemisebenzi yobuqhophololo. Ngesi sizathu, abantu abaninzi abazi ukuba iiMacs zabo zosulelekile de kube kusemva kwexesha.
Ezinye ze iimpawu ukuba iMac eyosulelekileyo inokubonisa zezi: ilahleko yokusebenza, ukufakwa kwezicelo ezitsha ngokuzimeleyo, ukucotha, iingxaki zokugcina, ukuthunyelwa kwee-imeyile kunye nemiyalezo kubantu obaqhelileyo... Ngokubanzi, nakuphi na ukuziphatha okungaqhelekanga kufuneka isenze sirhanele ubukho bento yasemzini.
Susa el isoftware efakiweyo
Ukuba isoftware enobungozi ifakiwe kwaye ifunyenwe kwisistim, iApple iyacebisa ukususwa kwenkqubo kwaye uyithumele kwinkunkuma. Le nkqubo inokuqhutywa ngu Imiyalelo Apple.
Ukufakwa de Isoftware yokhuselo
Ngenxa yembonakalo yezoyikiso kwi-Mac, kukho iinkampani ezininzi ezinikezela umsebenzi wazo kuzo Uphuculo lwenkqubo yeMac kunye nokhuseleko. Ezi softwares zikhusela iMac kwaye zicoce kwaye zisuse iinkqubo ezicinga ukuba ziyakrokrela. Ngendlela efanayo, balumkisa malunga nokufikelela kumaphepha ewebhu amvelaphi yabo abayichongi njengento ethembekileyo, kunye nezicelo ezingenalo ukhuseleko oluyimfuneko lweMac.
Ngaphandle koku, enye i-malware ithatha ukubonakala kwesoftware yokhuseleko. Ke ngoko, kuyacetyiswa ukuba uye kwiinkqubo ezaziwayo ezinerekhodi yomkhondo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » iapile » Ungazisusa njani iintsholongwane kwiMac yakho